सुनामीमा हराएकी आफ्नी श्रीमतीलाई विगत १० वर्षदेखि समुद्रभित्र खोजिरहेका छन यी श्रीमानले …. – List Khabar
Home / समाचार / सुनामीमा हराएकी आफ्नी श्रीमतीलाई विगत १० वर्षदेखि समुद्रभित्र खोजिरहेका छन यी श्रीमानले ….
सुनामीमा हराएकी आफ्नी श्रीमतीलाई विगत १० वर्षदेखि समुद्रभित्र खोजिरहेका छन यी श्रीमानले ….
admin November 14, 2021 समाचार Leaveacomment 84 Views
जापानमा सुनामीमा करिब २५ सय मानिस बे,पत्ता भएका थिए । त्यसैले जापान सरकारले विगत केही वर्षदेखि अण्डरवाटर सर्च अभियान चलाइरहेको छ ।
यासुओले निजी रुपमा अण्डरवाटर डाइभिङ त गर्छन् नै साथमा उनी स्थानीय प्रशासनसँग हरेक महिना सम्पर्क गरेपछि उनीहरुसँग पनि संर्च अभियानको लागि सहभागी हुन्छन् ।
यासुओकी पत्नीको शरीर अझै बेपत्ता छ । यासुओले आफ्नो जीवन पत्नीको खोजीमा लगाइसकेका छन् ।यासुओका अनुसार उनकी पत्नीले अन्तिम म्यासेजमा आफू बैंकको कामले थाकेको र घर आउन चाहेको बताएकी थिइन् । यही कारण यासुओलाई अझै पनि उनकी पत्नी घर फर्किन चाहन्छिन् भन्ने लाग्छ र उनले पत्नीको खोजी गरिरहेका छन्।
Previous स्कुटरमा भुपेन्द्र सँगै गएका साथीले खुलाए मृ’त्युको रहस्य,त्यो दिन यतिसम्मको हङ्गामा भएको रहेछ
Next विश्वकै २ ठूला प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर एक-आपसमा भेटिँदा पनी किन मिसिँदैन पानी ? यस्तो छ कारण